चितामा आ’गो लगाएपछि शव चल्मलाउन थालेपछि ड’राएर भा’गे मलामी! – PathivaraOnline
Home > रोचक > चितामा आ’गो लगाएपछि शव चल्मलाउन थालेपछि ड’राएर भा’गे मलामी!
admin June 29, 2020 रोचक, समाज	0
अन्तिम संस्कारका लागि श वलाई चितामा राखिएको थियो । चितामा आ गोसमेत लगाइएको थियो । तर एक्कासी चितामाथि राखिएका ती व्यक्तिले टाउको हल्लाएपछि को’कोहोलो मच्चि’यो । मृ त ठानिएका व्यक्ति चल्मलाउन थालेपछि केही मलामी भागेको भारतीय मिडिया आजतकले बताएको छ ।
साग उद्घाटनको पुर्वसंध्यामा दशरथ रंगशालामा आतिसबाजी
काठमाडौं: दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) को १३औं संस्करण आइतबारदेखि सुरु हुँदैछ । नेपालले सन् २०१६ मा यो प्रतियोगिता आयोजनाको जिम्मेबारी पाएको थियो । नेपालले जिम्मेवारी पाएको दुई वर्षभित्र यो प्रतियोगिता आयोजना गर्नु पथ्र्यो । तर, अपर्याप्त भौतिक पूर्वाधारका कारण पटकपटक प्रतियोगिता स्थगित हुँदै आएको थियो ।
अन्नतः चौथो पटक तोकिएको मितिमा आएर १३औं सागले साकार रुप लिने अवसर जुरेको छ । त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशालामा आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतियोगिताको उद्घाटन गर्नेछिन् । उद्घाटन अगाडि नै दशरथ रंगशालामा आतिसबाजी गरिएको छ । उद्घाटन सत्रको तयारी स्वरुप शुक्रबार साँझ आतिसबाजी गरिएको हो ।
तौल बढ्ने: सुत्ने बेलामा मोबाईल फोन प्रयोग गर्नाले मेटाबलिज्म प्रोसेसमा असर पर्छ । जसले गर्दा हाम्रो तौल बढ्छ ।
दिमागलाई असर: सुत्ने बेला मोबाईल फोनको प्रयोग गर्नाले दिमागलाई धेरै सोच्नु पर्ने हुन्छ । जसका कारण मेमोरी लसको समस्या पनि उत्पन्न हुन सक्छ ।
आँखामा प्रेशर: अंधेरोमा मोबाईल प्रयोग गर्नाले आँखामा धेरै प्रेशर पर्छ । जसले गर्दा आँखा रातो र कमजोर हुने समस्या हुन सक्छ । यसले आँखाको समस्या बढ्ने गर्छ ।
निन्द्रामा समस्या: यदि तपाँई मोबाईल छेउमा राखेर सुत्नुहुन्छ भनेपनि तपाईको लागी खतरा पनि छेउमै हुन सक्छ । मोबाईल छेउमा राख्दा नोटीफिकेशन अन अफ ,र भाईब्रेशनका कारण निन्द्रा गडबड हुन्छ । निन्द्रा पुरा भएन भने हामीलाई काम गर्न कठीन पर्छ ।
ध्यान दिन नसक्नु: मोबाईलको प्रयोग रातीमा गर्नाले फोकसमा समस्या हुन्छ । यसले हामीमा ध्यान दिने र सुन्ने समस्या उत्पन्न हुन्छ । डिप्रेसन यदि तपाई मोबाइल चलाईरहनु हुन्छ भने तपाईलाई डिप्रेसन भएको हुनसक्छ ।
चाईनिज आमा र नेपाली बाबुबाट जन्मिईन्, यति राम्री छोरी, कसरी भयो चिनियाँ र नेपालीको बिहे अनि डिभोर्स? – भिडियोमै हेर्नुहाेस्